Ministry of Federal Union Affairs - MOFUA | နောက်ဆုံးသတင်းများ
Ministry of Federal Union Affairs
ဖက်ဒရယ်စာစောင် အမှတ် (၆) နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းချက်
11 May 2022 သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ရှင်းလင်းချက်(၁) ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၀) ရက်နေ့ တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သော ဖက်ဒရယ်စာစောင် အမှတ် (၆) နှင့် ပတ်သက်၍ စာဖတ်သူများ၏ တုန့်ပြန်ချက်များစွာကို ရရှိထားပါသည်။ စာဖတ်သူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုအပေါ် အထူး ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဖော်ပြလိုပါသည်။ (၂) ဖက်ဒရယ်စာစောင်သည် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ဝေခြင်း ဖြစ်ပါသော်လည်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ၏ ပေါ်လစီစာတမ်း မဟုတ်ပါ။ ဖက်ဒရယ်ပညာပေး စာစောင်သာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကို ဖက်ဒရယ်စာစောင်၏ ရှေ့စာမျက်နှာတွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ (၃) ဖက်ဒရယ်စာစောင် အမှတ် (၆) တွင်ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာ (၂) ခု အပေါ် စာဖတ်သူများ တုန့်ပြန်ချက်တွင် မရှင်းမလင်းဖြစ်သည့်အချက်ကို ပြန်လည်ရှင်းလင်း တင်ပြချင်ပါသည်။(က) ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ် ယူနစ်များ၏ အမည်နာမ နှင့် ပတ်သက်၍ စာစောင်၏အာဘော်မှာ - ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများတွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့်အတိုင်း “ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း”ဟူ၍၎င်း၊ “တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်” ဟူ၍၎င်း၊ ခွဲခြားခြင်းကို ဆက်လက် မကျင့်သုံးတော့ပဲ၊ အမည်နာမတူများဖြင့်သာ ခေါ်ဆိုသင့်ကြောင်း ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စု ပာူသော အခေါ်အဝေါ်နှင့် ဆက်စပ်မှု ရှိစေရန် “ပြည်ထောင်များ” ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ခြင်းက သင့်တော်မည်လား ဟုတင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (ခ) ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု အဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ် အရေအတွက်နှင့် ပတ်သက်၍ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ တွင် မဆုံးဖြတ်သေးပဲ၊ အမြဲတမ်းကျင့်သုံးမည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသစ်ကို တိုင်းပြုပြည်ပြုညီလာခံတွင် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းသည့် အခါမှသာ ဆုံးဖြတ်သင့်ကြောင်း မှတ်ချက်ဖြင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု၏ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ် အရေအတွက် သည် (၁၄)ခု ဖြစ်ရမည် ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ခြင်းမဟုတ်ပါကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုက တိုင်းပြုပြည်ပြုညီလာခံတွင် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ရမည့် ကိစ္စသာလျှင် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည် ရှင်းလင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ရေးရာဝန်ကြီးဌာန(၁၁ မေလ ၂၀၂၂)
(၂၂) နှစ်မြောက် ကယန်းအမျိုးသားနေ့သို့ ပေးပို့သည့်သဝဏ်လွှာ
11 April 2022 သတင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရhttps://www.nugmyanmar.orgအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့က(၂၂) နှစ်မြောက် ကယန်းအမျိုးသားနေ့သို့ ပေးပို့သည့်သဝဏ်လွှာ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၀) ရက်၁။ ယနေ့ကျရောက်သည့် (၂၂) နှစ်မြောက် ကယန်းအမျိုးသားနေ့အချိန်အခါသမယတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ၌ရောက်ရှိနေထိုင်နေကြသော ကယန်းအမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများအားလုံး ကိုယ်စိတ် နှစ်ဖြာ ကျန်းမာလုံခြုံ၍ ဘေးရန်အပေါင်းမှ ကင်းကွာကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည်။၂။ ကယန်းလူမျိုးသည် ကရင်နီအမျိုးသားအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည့် လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကယန်းလူမျိုး အပါအဝင်ဖြစ်သော ကရင်နီအမျိုးသားအုပ်စုသည် ကရင်အမျိုးသားအုပ်စု၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအုပ်စုတို့နှင့်အတူ လူမျိုးတူစုဖြစ်ပြီး ဘာသာစကားရင်းအရ (၇၅) ရာခိုင်နှုန်းကျော်တူညီကြောင်းသိရှိရသည်။ ထို့အတူ ကယန်း လူမျိုးများအနေဖြင့် ခရစ်နှစ် ၁၀၅၇ တွင် ကရင်နီပြည်အဖြစ် စတင်ထူထောင်ကြရာ၌ လည်းကောင်း၊ ၁၈၇၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၁) ရက်နေ့တွင် ဗြိတိသျှအစိုးရနှင့် မင်းတုန်းမင်းတို့က ကရင်နီပြည်ကို သီးခြားလွတ်လပ်သော ပြည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလာခဲ့ပြီးနောက်တွင်လည်းကောင်း အခြားသော ကရင်နီအမျိုးသားအုပ်စုဝင် လူမျိုး များနှင့်အတူတကွ အေးအတူပူအမျှ နေထိုင်လာခဲ့ကြသည်။၃။ ခရစ်နှစ် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ (၈-၁၀) ရက်များအတွင်း ကရင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ရှမ်း ပြည်နယ်နှင့် မန္တလေးတိုင်းတို့တွင်နေထိုင်သည့် ကယန်းလူမျိုးခေါင်းဆောင်များ၊ ကယန်းလူမျိုးနွယ်စု (၄) မျိုး ဖြစ်သော ကယန်းကငန်၊ ကယန်းကဲဒေါ့၊ ကယန်းလထာနှင့် ကယန်းကခေါင်းတို့မှ ခေါင်းဆောင်များ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ကယန်းလူမျိုးဆရာတော်ကြီးများ၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်များစုဝေးကာ ကယန်းလူမျိုးအတွက် အရေးကြီးသည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၃) ရပ်ဖြစ်သော လက်တင် အက္ခရာဖြင့်အသုံးပြုထားသည့်စာကို ပြုပြင်မွမ်းမံ၍ ကယန်းအမျိုးသားစာပေအဖြစ် အတည်ပြုခြင်း၊ ကယန်း ကငန်၊ ကယန်းကဲဒေါ့၊ ကယန်းလထာနှင့် ကယန်းကခေါင်းဟူသည့် မျိုးနွယ်စုများသည် ကယန်းအမျိုးသား တစ်ခုတည်းအဖြစ် ခံယူအတည်ပြုခြင်းနှင့် ကယန်းအမျိုးသားအလံတော်ကို အတည်ပြုခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ယင်းနှစ် ဧပြီလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် ကယန်းအမျိုးသားနေ့ကို ပထမဆုံးအကြိမ်စတင်ကျင်းပလာခဲ့ပြီး ယခု အခါ (၂၂) နှစ် ပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်သည်။၄။ ကယန်းလူမျိုးတို့၏ အန္တိမရည်မှန်းချက်မှာ အာဏာရှင်ဟူသမျှချုပ်ငြိမ်းရေး၊ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးနှင့် ကရင်နီအမျိုးသားဖြစ်သော ကယန်းလူမျိုးတို့ နေထိုင်ရာဒေသသည် ကရင်နီပြည်အတွင်း ပြန်လည်စုစည်းရောက်ရှိရေးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ယင်းအတွက် ကယန်းပြည်သစ် ပါတီအပါအဝင် ကယန်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုများက ဦးစီးဦးဆောင်ပြု ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရ ပေသည်။၅။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့တွင် တပ်မတော်က နိုင်ငံတော်အာဏာကို ထပ်မံလုယူ သိမ်းပိုက်ရန် ကြိုးစားလာခဲ့သောအခါ ကယန်းလူမျိုးများစွာက လက်မခံဘဲ ဆန့်ကျင့်ခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါအဝင် အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ပြီး ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်လိုကြသည့် ကယန်းလူမျိုးများအနေဖြင့် လက်တွေ့ ကျသည့် နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်ဆင်နွှဲနေကြသည်ကို တွေ့ရသည့်အတွက်လည်း များစွာ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါသည်။၆။ ယနေ့ကျရောက်သည့် (၂၂) နှစ်မြောက် ကယန်းအမျိုးသားနေ့မှစ၍ စစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငြိမ်းရေး၊ စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် ကယန်းအမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား များပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြသော လွတ်မြောက်ရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်ဆောင်ရွက်မှုများ လျင်မြန်စွာ ပြီးမြောက် အောင်မြင်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း ဤသဝဏ်လွှာကိုပေးပို့အပ်ပါသည်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ
(၇၄) နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့သို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့က ပေးပို့သည့်သဝဏ်လွှာ
20 February 2022 သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရhttps://nugmyanmar.org(၇၄) နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့သို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့က ပေးပို့သည့်သဝဏ်လွှာ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၀) ရက်ယနေ့ကျရောက်သော (၇၄) နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့တွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပနေရာအသီးသီး၌ ရှိနေကြသော ချင်းလူမျိုးများအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းပါသည်။ချင်းအမျိုးသားနေ့ဆိုသည်မှာ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအပါအဝင်၊ နယ် မြေဒေသအလိုက် မျိုးနွယ်စုအကြီးအကဲများအုပ်ချုပ်သည့်စနစ်အစား ဒီမိုကရေစီပြည်သူ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် အစားထိုး ကျင့်သုံးရန် ချင်းတစ်မျိုးသားလုံးက မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို အပြည့်အဝအသုံးပြု၍ ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ သည့် သမိုင်းဝင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့မှုများကို ဖော်ညွန်းသည့်နေ့ရက်ဖြစ်သည်။ ချင်းတောင်တန်းဒေသသည် ကချင်တောင်တန်းဒေသ၊ ဖက်ဒရယ်ရှမ်းပြည် (Federated Shan States)၊ ဗမာပြည်မ (Ministerial Burma) တို့နှင့်အတူ ပင်လုံစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ချင်းပြည်နှင့်ချင်းလူမျိုးများ သည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ထောင်ဘက် ပြည်ထောင်တစ်ခု၊ လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပေသည်။ ချင်း လူမျိုးများသည် ခေတ်အဆက် ဆက် ပြည်ထောင်စုအရေး ကျရာကဏ္ဍမှတာဝန်ကျေပွန်ခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့တွင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက ထပ်မံအာဏာသိမ်းယူရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ စစ်ကောင်စီသည် အာဏာသိမ်းယူမှုကို အကြမ်းမဖက် ဆန့်ကျင်ကြသည့် နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများစွာ အပေါ် အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခြင်း၊ ရက်စက်စွာဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ပြည်သူများ၏အသက်အိုးအိမ်ကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ အလွန်အကျွံစစ်အင်အားဖြင့် ထိုးစစ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြည်သူတို့၏ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်ခြင်းအစရှိသည်တို့ကို နေ့စဉ် ရက်ဆက် ကျုးလွန်လျက်ရှိပြီး ချင်းလူမျိုးများ အပါအဝင် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက ရရာနည်းလမ်းများဖြင့် ခုခံတွန်းလှန်နေကြရချိန်ဖြစ်သည်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပြီးသတ်ချုပ်ငြိမ်းပြီး ချင်းနယ်မြေများလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ခုခံတွန်းလှန်စစ်ကို ဆင်နွဲနေကြသည့် ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အသီးသီး၏ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာ စွန့်လွတ်စွန့်စား တိုက်ပွဲ ဝင်နေမှုများကိုအထူးလေးစားဂုဏ်ပြုပါကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့အတွက် တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ပါဝင်ကူညီလှူဒါန်း ပေးနေကြသော ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာရှိ ချင်းလူမျိုးများ၊ ချင်းအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမများကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း အလေးအနက်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ယနေ့ကျရောက်သော (၇၄) နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့မှစ၍ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေး၊ ချင်း အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးနှင့် စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေး အတွက် ချင်းအမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ဆောင်ရွက်မှုများ လျင်မြန်ပြည့်စုံစွာပြီးမြောက် အောင်မြင်နိုင် ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း ဤသဝဏ်လွှာကိုပေးပို့အပ်ပါသည်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ
(၇၅) နှစ်မြောက် စိန်ရတု မွန်အမျိုးသားနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့ပေးပို့သည့်သဝဏ်လွှာ
16 February 2022 သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရhttps://nugmyanmar.org(၇၅) နှစ်မြောက် စိန်ရတု မွန်အမျိုးသားနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့ပေးပို့သည့်သဝဏ်လွှာ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၃ ခုနှစ် တပို့တွဲလပြည့်ကျော် (၁) ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သည့် မွန်အမျိုးသားနေ့ သမယတွင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပါသည်။ဗုဒ္ဓသက္ကရာဇ် ၁၁၁၆ ခုနှစ် တပို့တွဲလပြည့်ကျော် (၁) ရက်နေ့တွင် မွန်အမျိုးသားညီနောင်နှစ်ပါးဖြစ်သည့် သမလမင်းနှင့် ဝိမလမင်းတို့က မျက်မှောက်ခေတ် ပဲခူးမြို့နေရာဒေသတွင် မွန်အမျိုးနွယ်စုတို့အား ဦးဆောင်ကာ ပထမဟံသာဝတီ မွန်နေပြည်တော်ကိုထူထောင်ခဲ့သည်။ ယင်းနေ့ကို မွန်အမျိုးသားနေ့ အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် လွန်ခဲ့သည့်ပထမထောင်စုနှစ်ကာလကတည်းကပင် မွန်လူမျိုးတို့၏ ကြီးမြတ်သောသမိုင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အဆင့်အတန်း မြင့်မားစွာတည်ရှိခဲ့ခြင်းကို အသိအမှတ်ပြု မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ရာမညဒေသဟုအမည်တွင်သည့် လက်ရှိ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွင် မွန်လူမျိုး တို့သည် ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားရေးအတွက် စေတီပုထိုးကျောင်းကန်များတည်ဆောက်ခြင်း၊ မြို့ပြရပ်ရွာများ ထူထောင်ခြင်း၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ကူးလူးဆက်ဆံရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းများ ရှိခဲ့သည်သာမက အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ပြန့်ပွားရေးအတွက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်း များ၌ အထင်အရှားတွေ့ရှိရပေသည်။ခေတ်အဆက်ဆက် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝကျင့်သုံးခဲ့ကြသည့် မွန်လူမျိုးတို့သည် ဗြိတိသျှကိုလိုနီလက်အောက်သို့ အခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနည်းတူ ရောက်ရှိခဲ့ရသည်။ ထို့အတူ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရှိ အခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနည်းတူ ဗြိတိသျှနှင့် ဂျပန်တို့အား ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရာတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိ ပြီးနောက် ဖဆပလခေါင်းဆောင်များထံ မွန်ပြည်နယ်သတ်မှတ်ပေးရန် အရေးဆိုသည့်အခါ ဖဆပလ ခေါင်းဆောင်များက ငြင်းပယ်ခဲ့သဖြင့် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကို မလွဲမရှောင်သာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ မွန်အမျိုးသားများသည် ခေတ်အဆက်ဆက် စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရရှိရေးအတွက် ခိုင်မာပြတ်သားသောရပ်တည်မှုများဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အတူ ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးအတွက် အခြားသော တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကို မောင်နှမများနှင့်အတူ လက်တွဲပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်သည် အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်က နိုင်ငံတော်အာဏာကို လုယူသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအပေါ် အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခြင်းများကို နေ့စဉ်ရက်ဆက် ကျူးလွန်နေသောကြောင့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက ရရာနည်းလမ်းများဖြင့် ခုခံတွန်းလှန်နေကြရချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအချိန်အခါတွင် မွန်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုများသည် အခြားသောတိုင်းရင်းသား ပြည်သူများနှင့်အတူ တစ်စိတ်တစ်ဝမ်း တည်းဖြင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှ ပြည်သူ့ဘဝ လွတ်မြောက်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေး၊ တန်းတူညီမျှရရှိရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး ဟူသည့် နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်များဖြင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူ့ဘဝလွတ်မြောက်ရေးအတွက် စုစည်းလက်တွဲပြီး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ယနေ့ကျရောက်သည့် မွန်အမျိုးသားနေ့တွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် နှစ်ပေါင်း (၇၀) ကျော် အသက်သွေးချွေးပေးအပ်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည့် မွန်လူမျိုးတို့အား ဦးညွတ်ဂုဏ်ပြုပါကြောင်းနှင့် နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည့် မွန်ပြည်သူများ၊ မွန်လူငယ်များ၊ မွန်အမျိုးသမီးများ၊ မွန်ကျောင်းသားများအား အထူးပင် ဦးညွတ်ဂုဏ်ပြုပါကြောင်းဖော်ပြရင်း ဤသဝဏ်လွှာကို ပေးပို့အပ်ပါသည်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ (NUCC) ၏ ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း (၇၅) နှစ်ပြည့်သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
12 February 2022 သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
1. Today marks the 75" anniversary of the signing of the Panglong Agreement on 12 February 1947. On that day, ethnic representatives representing Burma proper, the Federated Shan States, the Kachin Hills, and Chin Hills signed and together pledged to achieve independence from the British Colonial Empire and to buildaFederal Democratic Union where there would be co-existence and equality in good times and bad, without compromising the right to self-determination.2. However, since independence, this Federal Democratic Union could not be established due to military dictatorships, chauvinism, one-party authoritarianism, and successive governments that politicized and exploited ethnicity, language, and religion in an attempt to divide and rule.3. Successive governments used lies and manipulation to pretend as ifaFederal Democratic Union, to which so many ethnic peoples aspired, had indeed been established while violating commitments contained within the Panglong Agreement by exercisingaUnitary State system. Nonetheless, while celebrating the 12" of February as Union Day, throughout the years, they methodically portrayed, with clear political intentions, ethnic nationalities who strove foraFederal Democratic Union as destructive elements, subjecting them to systematic discrimination and acts of brutal oppression and persecution.4. It is important that revolutionary forces, including the National Unity Government, see clearly the suffering and losses ethnic peoples have faced due to the failure of previous successive governments in implementing the Panglong Agreement and related commitments and recognize the utmost importance of preventing it from happening once again in the future and of implementing the Panglong Agreement and related commitments precisely. Additionally, it is necessary to formaFederal Democratic Union that ethnic peoples want in accordance with the Panglong Agreement, Panglong commitments and the Federal Democracy Charter. Only after eradicating military dictatorship and all forms of dictatorship canaFederal Democratic Union be established.5. We urge the National Unity Government,agovernment of and representing the people, to take full responsibility and accountability for, and apologize to all those who have suffered from discrimination, oppression, crimes against humanity, war crimes and genocide perpetrated by military dictators, and governments of the past, and urge the National Unity Government to take decisive actions accordingly.6. We, the National Unity Consultative Council, express our most sincere apologies to all ethnic peoples and indeed, to all peoples for violations of the Panglong Agreement and commitments made by previous successive governments, and for the historical brutality, oppression, violence, bullying, and discrimination these groups have suffered.7. The National Unity Consultative Council solemnly pledges to work tirelessly and consistently to eradicate all forms of dictatorship, including military dictatorship, to implement solidarity and commitments based on the Panglong Agreement, Panglong commitments and fundamental principles contained within the Federal Democracy Charter, to abolish nationalism, and to build the Federal Democratic Union that all ethnic peoples want.With loyalty to the revolution National Unity Consultative Council
ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း (၇၅) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်စာစောင်
09 February 2022 သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ပင်လုံစာချုပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ အနှစ်သာရနှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုရခြင်း၏ ပထမရည်ရွယ်ချက်သည် ပင်လုံစာချုပ်၏ နိဒါန်းတွင် ဖော်ပြ ထားသည့်အတိုင်း “ကြားဖြတ်မြန်မာအစိုးရနှင့် ချက်ချင်းပူးပေါင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ရှမ်း၊ ကချင် နှင့် ချင်း တို့သည် လွတ်လပ်ရေးကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ရရှိလိမ့်မည်ဟု အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အဖွဲ့ဝင် များက ယုံကြည်သည့်အတိုင်း” အချက် (၉) ချက်ပါဝင်သော ပင်လုံစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှမ်း၊ ကချင် နှင့် ချင်း တို့သည် သီးခြားစီဖြင့် လွတ်လပ်ရေးရယူ၍ သီးခြား အမျိုးသားနိုင်ငံများ ထူထောင်ပိုင်ခွင့် ရှိသော်လည်း ကြားဖြတ်မြန်မာအစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းလိုက်ခြင်း အားဖြင့် လွတ်လပ်ရေးကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ရရှိကြမည်ဟု ယုံကြည်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ပင်လုံစာချုပ်၏ အနှစ်သာရပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် ချုပ်ဆိုခဲ့သော “ပင်လုံစာချုပ်” အရ ဗြိတိသျှကိုလိုနီ (၄) ခုကို ပေါင်းစု၍ ဖွဲ့စည်းထူထောင်ထားသော တိုင်းပြည်ဖြစ် သည်။ ထိုကိုလိုနီနယ် (၄) ခုတို့ကို နယ်ချဲ့ဗြိတိသျှတို့က သီးခြားအချိန်တွင် သီးခြားစီဖြင့် တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ပြိး ကိုလိုနီဘဝတစ်လျှောက်လုံး သီးခြားဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေများဖြင့် သီးခြားစီ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ကိုလိုနီများပင်ဖြစ်ကြသည်။ ယင်းတို့မှာ -§ ၁၈၉၅ ခုနှစ်တွင် ရေးဆွဲပြဌာန်းခဲ့သော “Kachin Hills Tribes Regulation” အရ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော “ကချင်တောင်တန်းဒေသ”§ ၁၈၉၆ ခုနှစ်တွင် ရေးဆွဲပြဌာန်းခဲ့သော “Chin Hills Regulation” အရ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော “ချင်းတောင်တန်းဒေသ”§ ၁၈၈၈ ခုနှစ်တွင် ရေးဆွဲပြဌာန်းခဲ့သော “Shan States Act” ကို ၁၉၂၂ တွင် “Federated Shan States Act” အဖြစ် ပြင်ဆင်ပြဌာန်း၍ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော “ပြည်ထောင်စုရှမ်းပြည်” နှင့်§ ၁၉၃၅ ခုနှစ်တွင် ရေးဆွဲပြဌာန်း၍ ၁၉၃၇ ခုနှစ်တွင် အသက်ဝင် ကျင့်သုံးခဲ့သော “1935 Burma Act” အရ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် ကိုလိုနီခေတ်မတိုင်ခင် မြန်မာမင်းများ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့် နယ်မြေတို့ပင် ဖြစ်ကြသည်။1935 Burma Act အရ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော နယ်မြေများထဲတွင် ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ် မတိုင်မှီ မြန်မာမင်းများက တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့သော မွန်ပြည်နှင့် ရခိုင်ပြည်တို့ အပါအဝင် ကရင်လူ မျိုးများ အများစုနေထိုင်ရာ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများ ပါဝင်ခဲ့သည်။ကိုလိုနီခေတ်တစ်လျှောက်လုံး လွတ်လပ်၍ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်တိုင်းပြည်အဖြစ် ရပ် တည်ခဲ့သော ကရင်နီပြည် (ယခု ကယားပြည်နယ်) ကိုမူ ပင်လုံညီလာခံသို့ ဖိတ်ကြားခြင်း မပြုခဲ့ပေ။ လေ့လာသူအချို့သာ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းမှာ ပင်လုံညီလာခံသည် ဗြိတိသျှကိုလိုနီ စနစ်အောက်တွင် လွတ်လပ်ရေး ဆုံးရှုံးခဲ့ကြသော လူမျိုးများ၏ အနာဂတ်အရေးကို တိုင်ပင်သော ညီလာခံဖြစ်၍ လွတ်လပ်သော ကရင်နီလူမျိုးများအရေးကို တိုင်ပင်စရာအကြောင်း မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့တို့သည် ကိုလိုနီနယ်များကို လွတ်လပ်သော လူမျိုးများအဖြစ် ရှိနေသော ဘဝမှ သီးခြားအချိန်တွင် သီးခြားစီ တိုက်ခိုက်ပြီး သိမ်းပိုက်ခဲ့သောကြောင့် ကိုလိုနီခေတ် ကုန်ဆုံး သော အချိန်တွင်လည်း ထိုကိုလိုနီနယ် (၄) ခုတို့သည် သီးခြားစီဖြင့် လွတ်လပ်ရေးရယူ၍ သီးခြား အမျိုးသားနိုင်ငံတော်များကို သီးခြားစီ ထူထောင်ပိုင်ခွင့် ရှိခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် ထိုကိုလိုနီနယ် (၄) ခုမှ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးများသည် ၁၉၄၆ ခုနှစ် မတ်လတွင် တစ်ကြိမ်၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ လတွင် တစ်ကြိမ်၊ “ပင်လုံညီလာခံ”ကြီးကို နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ကျင်းပ၍ လွတ်လပ်ရေးကို အတူတကွ ရယူရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် ချုပ်ဆိုခဲ့သော “ပင်လုံစာချုပ်” သည် ကိုလိုနီခေတ်မတိုင်ခင် သီးခြားလွတ်လပ်၍ ကိုလိုနီခေတ်တစ်လျှောက်လုံး သီးခြားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေများဖြင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ဗြိတိသျှကိုလိုနီ (၄) ခုရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများက သီးခြားစီဖြင့် လွတ်လပ်ရေးရယူ၍ မိမိတို့၏ အမျိုးသားနိုင်ငံတောများကို သီးခြားစီ ထူထောင်ခြင်း မပြုဘဲ လွတ်လပ်ရေးကို အတူတကွ ရယူကာ ဒီမိုကရေစီရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝရှိသော ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တစ်ခုကို အတူတကွ ထူထောင်ကြရန် ပဋိဉာဉ်ပြုခဲ့ကြသော စာချုပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ပင်လုံစာချုပ်၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ၁။ ပင်လုံစာချုပ်သည် ၁၉၂၂ Federated Shan States Act အရ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ပြည်ထောင်စု ရှမ်းပြည်၊ ၁၈၉၅ Kachin Hills Tribes Regulation အရ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ကချင်တောင်တန်း ဒေသနှင့် ၁၈၉၆ Chin Hills Regulation အရ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ချင်းတောင်တန်းဒေသတို့က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်သာ မြန်မာပြည်ကြားဖြတ်အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်း၍ လွတ်လပ်ရေး ကို အတူတကွ ရယူကာ တန်းတူရည်တူ ပူးပေါင်းသော ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်သစ်တစ်ခုကို အတူတကွ ထူထောင်ကြရမည်ဟု ပဋိဉာဉ်ပြုသော စာချုပ်ပင် ဖြစ်သည်။ ၂။ ပင်လုံစာချုပ်အရ ပူးပေါင်းပြီး အသစ်ဖွဲ့စည်းထူထောင်မည့် ပြည်ထောင်စုတွင် အဖွဲ့ဝင်ပြည် နယ်များအဖြစ် ပါဝင်နေကြမည့် တောင်တန်းဒေသများဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသော ပြည်ထောင်စု ရှမ်းပြည်၊ ကချင်တောင်တန်းဒေသနှင့် ချင်းတောင်တန်းဒေသများ၏ မိမိတို့နယ်မြေအတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝရှိစေရန် “မူ” အားဖြင့် သဘောတူကြသည်။ ပင်လုံစာချုပ်တွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် တည်းဟူသော တောင်တန်းဒေသများအတွင်း လွတ်လပ်စွာ အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် စီမံခန့်ခွဲခွင့်များ ကို နိုင်ငံရေးအရ အလွန်အနှစ်သာရ ပြည့်ဝသော (Full Autonomy) ဆိုသည့် အင်္ဂလိပ်စကား လုံးကို သုံးထားပါသည်။ ယင်းသည် ပင်လုံစာချုပ်အပိုဒ် (၅) ဖြစ်သည်။ ၃။ ပင်လုံစာချုပ်အပိုဒ် (၆) အရ ကချင်ပြည်နယ်ကို ဖွဲ့စည်းသောအခါ ယခင် Kachin Hills Tribes Regulation အရ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ကချင်တောင်တန်းဒေသ သာမက မြစ်ကြီးနားခရိုင် နှင့် ဗန်းမော်ခရိုင်တို့ကို ကချင်ပြည်နယ်တွင် ထည့်သွင်းထားရမည်ဟူသော အချက်ဖြစ်သည်။ ယင်းအချက်သည် ပြည်ထောင်စုကို ထူထောင်ခဲ့သည့် ဖျောက်ဖျက်၍ မရသော ပင်လုံစာချုပ် ၏ သဘောတူညီချက် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၁၉၄၇ ခုနှစ် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း (၁) ပုဒ်မ (၆) အရ ကချင်ပြည်နယ် နယ်နိမိတ်အတွင်း မြစ်ကြီးနားခရိုင်နှင့် ဗန်းမော် ခရိုင်တို့ကို ထည့်သွင်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၄။ ပင်လုံစာချုပ်အပိုဒ် (၇) အရ ဖွဲ့စည်းထူထောင်မည့် ပြည်ထောင်စုကြီးတွင် အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ် များအဖြစ် ပါဝင်လာကြမည့် တောင်တန်းဒေသများတွင် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးရမည် ဖြစ်ပြီး ထိုဒေသများရှိ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုနှင့် နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးများနှင့် ရပိုင်ခွင့်များ အပြည့်အဝ ခံစားခွင့် ရှိစေရမည်ဟု အာမခံချက် ပေးထား သည်။ ၅။ ပင်လုံစာချုပ်အပိုဒ် (၈) အရ ပြည်ထောင်စုရှမ်းပြည်၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်စွာ စီမံ ခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ကို အာမခံချက်ထားပြီး၊ ထိုစာချုပ် အပိုဒ် (၉) အရ ကချင်တောင်တန်းဒေသနှင့် ချင်းတောင်တန်းဒေသများကို ပြည်ထောင်စုရှမ်းပြည်ကဲ့သို့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်စွာ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့် ရရှိရေးနှင့် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များအကြား ဘဏ္ဍာရေးနှင့် သဘာ ဝသယံဇာတများကို မျှဝေခံစားကျင့်သုံးခွင့် ရှိစေရေးကို နည်းလမ်းရှာဖွေရန် အာမခံချက် ပေးထားသော အချက်ဖြစ်သည်။ ရည်ညွှန်းကိုးကား။ ပင်လုံလက်စွဲ (၂၀၁၈)၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ
(၄၂)ကြိမ်မြောက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး (၅/၂၀၂၂) ကျင်းပပြုလုပ်
08 February 2022 သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ဇန်နဝါရီ ၈၊ ၂၀၂၂(၄၂)ကြိမ်မြောက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အစည်အဝေး (၅/၂၀၂၂)ကို ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှီးလ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်ခိုင်သန်းနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ဒုဝန်ကြီးများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အစည်းအဝေးတွင် ယာယီသမ္မတကြီဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ အာဏာသိမ်းရန် ကြုံရွယ်မှု တစ်နှစ်ပြည့်နေ့တွင် လူထုဦးဆောင်တဲ့ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သော silent strike လှုပ်ရှားမှုကို လူထုတရပ်လုံး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပါဝင်ခဲ့ကြတာကို လေးစား ဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း၊ တဖက်မှာလည်း အာဏာသိမ်း တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အနေနဲ့ အမေရိကန်၊ ကနေဒါနှင့် ဗြိတိန်အစိုးရတို့ပူးပေါင်းပြီး အာဏာရှင်များနှင့် ၄င်းတို့၏ ထောက်တိုင်များကို စီးပွားရေးအရ ပိတ်စို့ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီလက်အောက်မှ အတူလွတ်လပ်ရေးယူခဲ့ကြသည့် ကချင်၊ ကရင်နီ၊ ချင်း၊ ရှမ်းနှင့် ဗမာခေါင်းဆောင်များ ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြကြောင်း၊ တိုင်းပြည်ကို ဒီမိုကရေစီ နှင့် တိုင်းရင်းသားများ ကိုယ်ပိုင်ပြဠာန်းအပြည့်အဝရှိသည့် ဖက်ဒရယ်စနစ်အဖြစ် တည်ထောင်ဖို့ ကတိပြုခဲ့ကြသော်လည်း အဆက်ဆက်သော တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်ခဲ့သည့် ခေါင်းဆောင်များနှင့် အာဏာရှင်များအနေဖြင့် အကောင်အထည် မဖော်ခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် တိုင်းပြည်သည်လည်း ပြည်တွင်းစစ်နွံ့ထဲ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ပေါင်းများစွာ နစ်ကာ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ကြောင်း၊ ဒီကနေ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့် အာဏာရှင်စနစ်ကို အပြီးတိုင် တိုက်ဖျက်ပြီး တိုင်းရင်းသားပြည်သူအပေါင်းတို့ လိုလားတောင့်တသည့် ငြိမ်းချမ်းသော၊ လွတ်လပ်မှုကို အာမခံပေးနိုင်သည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ်ကို ဖော်ဆောင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ပြဠာန်းခွင့်နှင့် ကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့် အပြည့်အဝရှိသည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ထူထောင်ဖို့ ကတိပိုင်းဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ မြန်မာနိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်ရေးခရီးတွင် အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေကြသော အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ အားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ် အတူလက်တွဲပါဝင်လာနိုင်အောင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကတ်ဘိနက်အဖွဲ့ ဝင်များ အတူဝိုင်းဝန်းကြိုးစားကြစို့လို့ တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်က တော်လှန်ရေးကာလဖြစ်တာကြောင့် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာ အခြေအနေတွေကို ကြားသိနေရသလို တဘက်ကလည်း စိတ်အားတက်စရာ အခြေအနေတွေကို ကြားရပြန်ကြောင်း။ တကယ်‌တော့ လူတစု အာဏာရူးပြီး စတင်လုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ ဒီအာဏာသိမ်းပွဲမှာ ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ အသက်တွေ ဘဝတွေအတွက် နေ့စဉ်စိတ်မကောင်းဖြစ်စွာနဲ့ဘဲ ကျွန်တော်တို့ တော်လှန်ရေးကြီး အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အားစိုက်ကြိုးစား နေပါကြောင်း။ ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ တော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးနဲ့ အတူအတကွ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကို ဒီကနေ့ အစည်းအဝေးမှာ ထပ်လောင်းကတိပြု ပြောကြားလိုပါကြောင်း။ဒီအပတ်အတွင်းမှာ ကော်မတီအစည်းအဝေးတွေ အတော်များများ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မူဝါဒဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးစီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း။ ကြားကာလ ဒေသန္တရ ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှု ကော်မတီအနေနဲ့ဆိုရင် စီမံဆောင်ရွက်နေတာတွေ အတော်များပါကြောင်း။ ကြားကာလအုပ်ချုပ်မှု ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် မြို့နယ်အသစ်တွေ ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့လည်း စီမံဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိသလို တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် လုံခြုံရေးနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေး စီမံချက်ကိုလည်း ရေးဆွဲနေတာရှိပါကြောင်း။ ဒါ့အပြင် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဥပဒေကြမ်းကိုလည်း ပြည်ထဲရေးကဦးဆောင်ပြီး ရေးဆွဲနေတာပြီးသွားပြီဖြစ်ပါကြောင်း။ ဒီတပတ်အတွင်းမှာ ကြားကာလတရာားစီရင်မှု ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေး တွေစီမံဆောင်ရွက်ခဲ့သလို ပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေကြ ပြည်သူ့ရင်ခွင်ဖော်ဆောင်မှု ကော်မတီရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် တွေလည်း စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း။ ဒီဖေဖော်ဝါရီလဟာ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ အပ်နှင်းထားတဲ့ ပြည်သူ့အာဏာကို လူတစုရဲ့ မတရားသိမ်းပိုက်ခြင်းကို ခံရတဲ့လဖြစ်သလို ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေရဲ့ မတရားမှုကို လက်မခံနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ ပြင်းပြတဲ့ စုစည်းမှုအားတွေကို စတင်ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းအတွက် အင်မတန်အရေးပါတဲ့ လတလဖြစ်ပါကြောင်း။ ကျွန်တော်တို့NUG အနေနဲ့လည်း အကြမ်းဖက်ခြင်းကိုနည်းမျိုးစုံနဲ့ ခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက် တော်လှန်ရေး အင်အားစုများနဲ့ အတူတကွ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ဆက်လက်တော်လှန်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်း။ အခုဆိုရင် ကျနော်တို့ ခုခံကာကွယ်စစ်ဟာလည်း အတော်လေးခရီးရောက်နေပြီဖြစ်သလို မြို့ကြီးတွေရော ကျေးလက်ပါ မကျန် ပြည်သူတွေရဲ့ တော်လှန်မှုပုံစံမျိုးစုံကလည်း အားမကျသွားဘဲ လူထုဟာ တောင့်ခံတွန်းလှန် နေကြဆဲ ဖြစ်တာမို့ မဝေးတော့တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေအတွက် ကျွန်တာ်တို့ ရေကုန်ရေခမ်း တိုက်ပွဲဝင်သွားကြရအောင်လို့ ပြောကြားလိုပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေက တင်ပြဆွေးနေးရာ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ရေးရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဆလိုင်းလျန်မှုန်းဆာခေါင်းက ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း ၇၅နှစ်မြောက် အခမ်းအနားကျင်းပရေး ပြင်ဆင်နေမှုတွေကို တင်ပြဆွေးနွေးပြီး အစည်းအဝေးကို မနက် ၁ဝနာရီ ၄၅မိနစ်မှာ ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။
(၆၁) နှစ်မြောက် ကချင်တော်လှန်ရေးနေ့သို့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှ ပေးပို့သည့် သဝဏ်လွှာ
05 February 2022 သတင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရhttps://nugmyanmar.org(၆၁) နှစ်မြောက် ကချင်တော်လှန်ရေးနေ့သို့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှ ပေးပို့သည့် သဝဏ်လွှာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၅) ရက်၁။ ကချင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်များသည် အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့အစိုးရ လက်အောက်မှ လွတ်လပ်ရေးကို အတူတကွ ရယူရန်အတွက် အခြားတိုင်းရင်းသားများနှင့်အတူ ပင်လုံစာချုပ်ကို ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ကြပါသည်။ သို့ရာတွင် ပင်လုံစာချုပ်ပါ အမျိုးသားတန်းတူရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နှင့် ကိုယ့်ကံကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးခွင့်တို့ကို ရှုံးဆုံးခဲ့ရသည့်အတွက် ၁၉၆၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်လာခဲ့ကြရာ ယနေ့သည် ကချင်တော်လှန်ရေး၏ (၆၁) နှစ်မြောက်သော နေ့ထူးနေ့မြတ် တစ်ရက်ဖြစ်ပါသည်။၂။ နှစ်ပေါင်း (၆၁) နှစ်အတွင်း အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ဖော်ဆောင်ရေး အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရင်း စွန့်လွှတ်စွန့်စား အသက်ပေးသွားကြသည့် ကချင့်တော်လှန်ရေး ရဲဘော်များနှင့် ကချင့်အာဇာနည်များကိုသာမက တော်လှန်ရေးကာလတစ်လျှောက် အနှစ်နာခံပေးဆပ်ခဲ့ကြသည့် မိသားစုဝင်များနှင့် ကချင်ပြည်သူလူထုအပေါင်းကို ကိုယ်ချင်းစာ အသိအမှတ်ပြုလျက် အလေးအနက် ဦးညွတ်ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါသည်။ ၃။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့တွင် မင်းအောင်လှိုင်နှင့် စစ်အုပ်စုမှ နိုင်ငံတော် အာဏာကို လက်နက်အားကိုး ထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းကြောင့် မြန်မာလူထုတစ်ရပ်လုံးသည် စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြ ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ ကြသည့် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးအား အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုသည် အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်ခြင်း နှင့် မတရားရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းတို့ကို ရက်ရက်စက်စက် ကျူးလွန်ခဲ့သည်သာမက ပြည်သူ့အိုးအိမ်စည်းစိမ်များကိုလည်း အကြောင်းမဲ့ မီးရှို့ဖျက်ဆီး လျက်ရှိသည်။ အကြမ်းဖက် စစ်တပ်၏ ဤကဲ့သို့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည့် လုပ်ရပ်များအား တိုင်းရင်းသားပြည်နယ် များတွင် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ နာကျင်ခံစားခဲ့ရပြီး ဖြစ်သည်။ ခေတ်အဆက်ဆက်အာဏာရှင်များ၏ သတင်းအမှောင်ချမှု၊ ရည်ရွယ်ချက်ချက်ရှိရှိ မှားယွင်းစွာ ဝါဒဖြန့်မှုများကြောင့် တိုင်းရင်းသားများ၏ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်မှုအား အဖျက်အမှောင့်လုပ်ရပ်အဖြစ် ရှုမြင်ခဲ့ကြသည့် ပြည်မနေ ဗမာလူထုအများစုသည် ယခုအခါ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ လူမဆန်သည့် လုပ်ရပ်များအား မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ခံစားနေရကြရလျက်ရှိပြီး တိုင်းရင်းသားများ၏ နစ်နာမှုများအား ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း သိမြင် ကိုယ်ချင်းစာလျက် ရှိနေကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ၄။ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ပြီး ပြည်သူများနှင့် တစ်သမတ်တည်း ရပ်တည်လျက် ရှိသည့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO/KIA) နှင့် ကချင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်များကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့် အစဉ်အမြဲ သတိတရကျေးဇူးတင်ရှိလျက်ရှိပြီး အာဏာရှင်စနစ် ဖျက်သိမ်းရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ် ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် ဦးတည်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံသစ်ထူထောင်မည့် တော်လှန်ရေးခရီးတွင် အမြဲလက်တွဲကာ ‌အောင်ပန်းဆွတ်ခူးသည်အထိ အတူတကွ ဆက်လက်ဆင်နွှဲကြပါစို့ဟု တိုက်တွန်းရင်း ယနေ့ကျရောက်သည့် (၆၁) နှစ်မြောက် ကချင်တော်လှန်ရေးနေ့ကို အလေးအမြတ် ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါသည်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
© 2022 Ministry of Federal Union Affairs - MOFUA. All Rights Reserved.